Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo Sheegay in Lasoo Celinayo Hantida Qaranka | SAHAN ONLINE
Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo Sheegay in Lasoo Celinayo Hantida Qaranka
Bakiga dhexe ee Soomaaliya oo cuskanaya sharciga lambarkiisu yahay 130 ee 22/04/2012, soo baxay ayaa waxa uu Bankiga dhexe siinayaa mas’uuliyadda ah in ii maamulo deeqaha rasmiga ah ee Soomaaliya ay ka hesho caalamka, meelkasta oo ay tahay.
Kaddib markii la soo gabo gabeeyay heshiiskii Shulman Rogers ee 14/07/2014 ee uu la galay Guddoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya taasoo ka dambeysay markii guddiga maamul wanaaga uu dabagal ku sameeyo hantida Soomaalida ee hakadka la geliyay.
Jawaabta rasmi ah oo ay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ka bixisay arrintan ayaa ah in guddiga mmul wanaaga ay kaashanayaan hay’adaha UNODC iyo World bank, lacagaha leys daba mariyay, iyadoo hay’adahaasina ay ku sameyn doonaan dabagal, isla markaana ay xogta la wadaagi doonaan Madaxweynaha, baarlamaanka, Golaha Wasiirada iyo guddiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa kala hadlay Wasaaradda Maaliyadda si uu uga caaiyo, ilaalinta hantida Qaranka, iyadoo kooxdan uu maamuli doono, isla markaana uu hogaamin doono Bankiga dhexe ee Soomaaliya, waxayna ka koobnaan doonaan Wakiilo ka kala socda Bankiga dhexe iyo Wasaaradda Maaliyadda.
Hadaba si loo taageero kooxdan, dabagalkooda ku aadan dib u soo celinta hantida hakadka ku jirta, waxay caawimaad dheeri ah ka helayaan STAR, iyagoo qaadaya tallaabo sharci ah oo loo marayo lacagaha hakadka ku jira.
Hay’adahan waxay sii wadi doonaan inay ka talo bixiyaan hanaanka loo marayo lacagaha la doonayo in dib loo soo celiyo.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay dadaal u galeysaa soo celinta macluumaadka la xiriiray Shulman Rogers, waxayna dowladda isku dayi doontaa inay wada shaqeyn dhaw la yeelato Golaha maamul wanaagga.
Kooxda Qaranka, Guddoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya, Xafiisyada Madaxweynaha. Ra’iisul wasaaraha iyo guddiga talinta Bankiga dhexe, waxa ay si joogto ah u wadaagi doonaan macluumaadkan, sidoo kale nidaamkan waxaa lala wadaagi doonaa bulshada Soomaaliyeed, iyada oo loo marinayo Warbaahinta gudaha.
Ujeedka kooxdan waa in la soo celiyo nus kamid ah hantida hadalka ku jirta ee Soomaaliyeed dabayaaqada sanadkan 2015-ta.